ဇှနျ ၁၅ရကျမှ ၁၇ရကျနအေ့တှငျး မိုးတှရှောမယျ့ဒသေမြားကို ခနျ့မှနျးပေးလိုကျတဲ့ မိုးနတျသမီးလေးစုစုစံ – SainPwar
SainPwar > ဗဟုသုတမြား > ဇှနျ ၁၅ရကျမှ ၁၇ရကျနအေ့တှငျး မိုးတှရှောမယျ့ဒသေမြားကို ခနျ့မှနျးပေးလိုကျတဲ့ မိုးနတျသမီးလေးစုစုစံ
ဇှနျ ၁၅ရကျမှ ၁၇ရကျနအေ့တှငျး မိုးတှရှောမယျ့ဒသေမြားကို ခနျ့မှနျးပေးလိုကျတဲ့ မိုးနတျသမီးလေးစုစုစံ
မငျးကိုကောငျးကငျနဲ့ တငျစားတတျတဲ့ ယောကျြားမြိုးဆိုတာ….
15/06/2022 🌧🌧 စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးရွာနိုင်ပြီး မိုးညှင်းခရိုင် ဗန်းမော်ခရိုင်မြစ်ကြီးနားခရိုင် ပူတာအိုခရိုင်ဒေသတွေမှာ မိုးကြီးရေလျှံနိုင်ပါတယ် ISSUE TIME 15/06/2022 at 1:45PM
15/06/2022 🌧🌧🌧🌧🌧ရခိုင်ပြည်နယ် ဧရာဝတီတိုင်းမှ ကြံခင်း မြန်အောင် ပဲခူးတိုင်းမှ ပြည်ခရိုင် တောင်ငူခရိုင်နှင့် နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ရမည်းသင်း ဒေသများတွင်မိုးရွာနိုင်ပါတယ် ISSUED TIME 15/06/2022 at 1:31PM
15/06/2022 🌧🌧🌧🌧🌧 ကလော ပင်းတယ ရွာငံ မြို့ကြီး တောင်သူကြိုက်မိုးတွေရွာမယ်လေ 🌧🌧🌧🌾🌾🌾 ISSUED TIME 15/06/2022 at 12:47PM
အနောက်တောင်မုတ်သုန်လေသည် နောက် ၃နာရီအတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ Odisha ပြည်နယ်ကမ်းခြေဒေသတွေကို ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ် ISSUED TIME 15/06/2022
15/06/2022 🌧🌧🌧 နေပြည်တော် ရေဆင်း တပ်ကုန်း ညောင်လွန့် ရမည်းသင်း မိုးအသင့်အတင့်ရွာနိုင်ပါတယ် ISSUED TIME 15/06/2022
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သုံးခွနဲ့ ကျောက်တန်းကြားက တံတားမြို့လေးကတော့ မိုးမျှော်စရာမလို စိုက်ပျိုးရေ ရမယ့်မိုးတွေရွာ 🌧🌧🌧
ကန့်ဘလူ သစ်ရာပင် ကျွန်းလှ တကောင်း ထီးချိုင့် လျှပ်စီးမိုးကြိုး မိုး ISSUED TIME 15/06/2022
ပူတာအိုခရိုင် မိုးရေချိန် ၃လက်မမှ ၁၀လက်မအထိရွာသွန်းနိုင်သဖြင့် ရေကြီးရေလျှံမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ် ဆွမ်ပရာဘွမ် မြို့နယ် အထူးသတိပြုကြပါ ISSUED TIME 15/06/2022
ဆွမ်ပရာဘွမ် သွေးချင်းတို့ပျော်ရာမြေ ၂၀၂၂ ဇွန်လ ၁၆ရက်နေ့ ၁၇ရက်နေ့ မိုးကြီးရေလျှံ သတိပြုရပါမယ် အဆိုပါရက်နေ့များတွင် ဆွမ်ပရာဘွမ် တနိုင်း ဘွမ်ဖာဘွမ်တောင်တန်းများပေါ်တွင်မိုးကြီးနိုင်ပြီး
ဒရူးခချောင်း ဇနန်ခချောင်း ဖုန်အင်ခချောင်းဖုန်ကျန်းခချောင်းတွေမှာ ချောင်းရေများအရှိန်အဟုန်ဖြင့်စီးဆင်းလာနိုင်ပါတယ် အင်ဆိုင်းယန် ဖုန်အင်ယန်
မလီယန် ခကရန်းယန် ဒေသတွေနှင့် ပူတာအို မချမ်းဘော ခေါင်လန်ဖူးဒေသတွေပါမိုးကြီးနိုင်သဖြင့် မလိခမြစ်ရေအထူးသတိပြုရပါမယ် ရေကြီးရေလျှံအထူးသတိပြုကြပါ ဘေးကင်းကြပါစေ အန္တရာယ်ရှိပါသဖြင့် အများသိအောင် ရှဲ ပေးကြပါ
လင်းခေးမြို့ 🌧🌧🌧 ၂၀၂၂ ဇွန်လ ၁၆ရက်နေ့ ၁၇ရက်နေ့ လေထန်နိုင်ပါတယ် လေထန်ချိန်တွင် တစ်နာရီ မိုင်၃၀ မှ ၃၅မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ် ဖန်သတိခ ၁၅ရက် ၁၆ရက်နေ့တွေ စိုက်ပျိုးသီးနှံဖြစ်ထွန်းစေမယ့် မိုးတွေရွာပါလိမ့်မယ်
၂၀၂၂ ဇွန်လ ၁၅ရက်နေ့မှ ၁၉ရက်နေ့အတွင်း ကချင်ပြည်နယ်ကြီးမှာ ထူးကဲမိုးရေချိန် ရွာသွန်းမြဲထက် ၃ဆပိုမိုရွာသွန်းနိုင်ပြီး မိုးကြီးရေလျှံနိုင်ကာ ဇွန်လ နောက်ဆုံး၁၀ရက်ပတ်အတွင်း ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ ဝဲယာ နံဘေးမြို့များ စိုးရိမ်ရေမှတ်များကို ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်
လဝေး ရက်ဝေးလည်းခန့်မှန်းပေးပြီးဖြစ်ပါတယ် ဧရာဝတီမြစ်ဘေး မြစ်ကမ်းအနီး ကမ်းပြိုနိုင်သောနေရာများ နှင့်ကျွန်းအ​တွင်း နေထိုင်ကြသူများ အထူးသတိထားကြပါ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်
၁၅ရက်နေ့ မိုး ⛈⛈⛈ တာချီလိတ်ခရိုင် ကျိုင်းတုံခရိုင် လွိုင်လင်ခရိုင် လင်းခေးခရိုင် စိုက်ပျိုးရေးတောင်သူလယ်သမားများရဲ့အကြိုက်မိုးတွေရွာနိုင်ပြီး တာချီလိတ်ခရိုင်မိုးကြီးနိုင်ပါတယ် ဖန်သတိခ😘😘😘
Previous Article အမှိုကျတို့…စက်ကူဟောငျးတို့ရှာတဲ့ အဖိုးကို ၁သောငျးတနျ ငှစေက်ကူတှပေေးလိုကျတဲ့အခါ….
Next Article ဇှနျလ 14 .2022 မှ ဇှနျလ 20 ..2022 အထိတဈပတျစာ ၇ရကျသားသမီး ဟောစာတမျး